Indlela efanelekileyo kakhulu yokuba yi-RHCE Certified
Indlela yokuba yiRHCE eqinisekisiweyo?
Inkqubo yokufumana i-RHCE Certified
Abaphulaphuli be-RHCE: Xa Ufanele Uhambe Kuphi?
Yintoni oya kuba nako ukukwazi ukwenza emva kokuba ube yi-RHCE Certified?
I-RHCE (i-Red Hat Certified Engineer) isatifikethi sisinye seziqinisekiso ezifunwayo nezicelwayo kwiinkqubo emhlabeni jikelele. I-RHCE i-Red Hat Certified Certified System (RHCSA) i-RHCSA enegunya elongezelelweyo kunye neempembelelo ezifunekayo ukuba zikhuphe ngokucacileyo inkqubo yesigqeba esiphezulu. I-RHCE iqinisekisile ukuqeqeshwa ilawulwa yongamela kunye nokusebenza iinkqubo ze-Red Hat Enterprise Linux ezisisiseko se-Linux dispersion system eyenziwe ngu-Red Hat. Le nkqubo ikhululekile kunye nomthombo ovulekileyo ngoku. Ngaloo ndlela ayimangalisi ukuba ukufumana isatifikethi seRHCE kubonwa njengenguqu yokuguqulwa eyenziwa yiengcali ze-IT. Iimbono zobugcisa ziqinisekisa kwaye zizalisekisa kakhulu. Nangona kunjalo, ukuba kuqinisekiswe i-RHCE kuthetha ukuba i-RHCSA iqinisekiswe okokuqala. Indlela yokuba yi-RHCE eqinisekisiwe ngayo?
Ngaphambi kokufumana isatifikethi seRHCE, kufuneka umntu abe ngu-RHCSA. Uqeqesho olumiselweyo lufanelekile kwiiseti zakho zamanje. Abo bavoti beWindows abanamava angaphantsi kwe-Linux kufuneka bahambe kwiikhompyutha ze-Red Hat System Administration I kunye ne-II (RH124 kunye ne-RH134) kunye ne-Red Hat System Administration III (RH254) ukulungiselela uviwo. Ukuba ayikho inkathazo eninzi ikhupha iincwadana ngaphantsi:
Abaphathi benkqubo yeWindows abanomncinci we-Linux encinane:
Ulawulo lwe-Red Hat System I (RH124)
I-Red Hat System Administration II (RH134)
I-Red Hat System Administration III (RH254)
Abalawuli be-Linux okanye i-UNIX abanama-1 kuma-3 amava ngamava:
I-RHCSA I-Rapid Track Course (RH199)
Unokuhlala kuyo nayiphi na indlela yoqeqesho efanelekileyo ukuthanda - iklasi yokufundela, kwiwebhu okanye kwiwebhsayithi yakho. Kukho iziseko ezininzi ezinika izifundo ze-RHCSA kunye namanye amazinga aphumelelayo.
Lezo zi-RHCSA ziqinisekisile iingcali ezinokufuna ukufumana inqanaba eliphezulu lokugcina ukugcina ingqalelo ekujoliswe kuyo ukuqhubela isistim zabo kwi-RHCE. Ungakwazi kwakhona ukufumana i-RHCE eqinisekisiwe kwisiganeko sokuba uyinkqubo yesigqeba esiphezulu kodwa asikaqinisekanga. Ukongezelela, kwithuba elide lokuba ugqibile iRHCE Rapid Track Course okanye abantu abagqibile ukuPhathwa kweeNkqubo I, II, no-III.
Ngoko ukugqiba isatifikethi seRHCE, umntu kufuneka adlule i-3.5 i-RHCE Exam (EX300) ngokujonga kweLuxu 7. Ngethuba lokuthi i-RHCE iqinisekisile iimfuno zokulungisa kwakhona okanye kwithuba elihle lokuba umntu anqwenele ukuthatha inxaxheba kwisaveyibhrikhi esekelwe ebhanini ngaphambi kokuthatha uvavanyo lwe-RHCE, kufuneka uhambe kwi-lab yeRHCE Certification lab (RH299). Olu luhlobo lwesine olunezandla oluqhutywe ngutitshala apho ufumana khona ukuphuka ukusebenza kuyo yonke iilabhu ukusuka kwiikholeji ze-Red Hat System Administration I, ii-II kunye ne-III, kunye nekhosi ye-Rapid Track.
Njengoko kuboniswe yi-Red Hat, njengento ebaluleke kakhulu nayiphi na i-RHCE ingaba yintoni eyenzayo kwi-RHCSA eqinisekisiwe. Nangona kunjalo, babeya kuba namandla okubeka iiparamitha zexesha lokusebenza; ukulungiselela izifundo ze-static, ukuhlukana kwezikhwebu, kunye nokulungiswa kweedilesi; ukudala nokudlulisa kunika i-akhawunti yokusetyenziswa kweenkqubo; inkqubo yokungena kwenkqubo, kubandakanywa ukungena ngemvume kude; cwangcisa i-initiator (iSCSI); sebenzisa igobolthi yokubhala ukwenza iinkqubo zenkxaso yenkqubo kunye nokuyila inkqubo yokunika ulawulo lwe-HTTP / HTTPS, i-FTP, i-NFS, i-SMB kunye njalo.
Kule miqolo, omnye kufuneka abe yi-RHCSA eqinisekisiwe ngaphambi kokufumana i-RHCE ukuqinisekisa ukuba i-RHCSA isatifikethi kunye nee-RHCSA zoqeqesho ziququzelelwe ekwakheni isizathu sokwenza izinto ezilindeleke ukuba zisebenze zonke izinto ze-Red Hat. Ukufumana i-RHCE iqinisekisile iphakamisa iziphumo ezingenangqondo eziziphumo kunye nokuvuma kwemboni. Nangona kunjalo, kufuneka ulandele inkqubo echazwe ngentla nge-Red Hat ukufumana isatifikethi. Kufuneka udlulise iimviwo ezimbalwa ukuphakamisa ukuzigcina kwakho ekukhunjuleni umgomo wokugqibela ukufumana uviwo lwe-RHCE.
Iingcebiso zokuHlola zeRHCSA - Indlela yokuPhononongwa kweRHCSA?
Yintoni i-Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | Red Hat Certification